FARQI Yaab Leh Oo U Dhaxeeyo Fariimihii Hore Ee Jaceylka Iyo Kuwa Maanta Leysku Qoro…!! - Hablaha Media Network
HMN:- Sida dadki hore is Jeclaa isu Salaami jireen ama Salaamaha isugu qori jireen
1. Ka socoto qof wax jecel. Ku socoto Qof la Jecel yahay
2. Iga gudoon Salaan ka soo go’day Kasha iyo Laabta,
3. Waxaan kugu salaamayaa 114ka Quraanka kariimka ah,
4. Waxaan hawada kuu soo marinayaa Salaan Kalgacal…
5. Iga hano dhambaal caashaq….
Dadka hada is Jecel markay isa Salaamayaan ama Qoraal isu qorayaan
1. From: Naf xanaaqsan. To: Naf laga shakiyay
2. Maxaa kugu dhacay Xalay hadaan balansaneyn? Waxaan ku booqday Cusbitaalka Islaan foolaneysay oo saacado ka dib dhashay! AMA Aroos baan aaday oo Xalay ku maqnaa
3. Hadaan fariin Messenger kuugu soo qoray maxaad iigu jawaabi weyday? Yaad la hadleysay saacado badan? Cidna lama hadleyn. Imtixaan Online ah ayaan ku jiray Jaamacada aan dhigto.
Haye ma sheekadaasaa keentay? Goormaad Jaamacad bilowday? Shalay ayaan bilaabay!
4. Maxaad ii soo wici weyday? Mobile-kaa dabka iga dhacay? Chargerkaa iga gubtay?
5. Maxaad beenta iigu sheegtay, Xalay waxaad igu tiri waa seexanayaa ka dibna Online baad ahayd ilaa aroorti? Haa fb ayaa la iga jabsaday marka aniga iyo Booliska ayaa Baaritaan wadnay, saaka ayaan soo ceshaday!
Kulli waqti Muran